Suuragal Ma Tahay In Xildhibaanada Britain Ay UK Ka Hor Istaagan Inay Ka Baxdo Midowga Yurub? | Baligubadlemedia.com
August 30, 2019 - Written by admin
Ra’isal wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in UK ay ka baxayso Midowga Yurub marka la gaaro 31-ka Octoobar
Waxaa jira xildhibaano badan oo ka soo horjeeda inay UK Midowga Yurub ka baxado heshiis la’aan, balse malaga yaabaa inay haatan ka hortagaan arrintaasi iyada oo ay boqoradda kala dirtay baarlamaanka?
Muxuu yahay Ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub ee heshiis la’aanta
Haddii ay Britain ka baxdo heshiis la’aan Midowga Yurub, taasi micneheedu wuxuu yahay inay si durba ah uga baxayaan iyada oo aan la gaarin wax heshiis ah oo ku saabsan geddi socodka ka bxitaanka. Waxay sidoo kale UK si dhaqsiya uga baxaysaa suuqa midka ah ee Yurub
Siyaasiyiin iyo ganacsato badan ayaa sheegay in haddii ay taasi dhacdo ay dhaawac badan u geysanayso dhaqaalaha dalka, halka dadka qaar ay sheegayaan in khatarta ka dhalan karta haddii ay Biritain ka baxdo Midowga Yurub heshiis la’aan laga badbadiyay.
Xildhibaanada waxa u furan laba waddo oo kaliya haddii ay doonayaan in uu qorshohooda hirgalo.
Haddii ay dowladda ay isku daydo inay meel marsio sharciyo cusub, xildhibaanada ayaa isku dayi karo inay si khasab ah ku badelaan sharciga ay dowladdu taageersan tahay, balse wasiirada ayaa sheegay in uusan jiri doonin wax sharci ah oo la meel marinayo inta u dhaxayso haatan iyo maalinta loo asteeyay ka bxitaanka, taas oo suuragal ah inay xilidhibaanada ay waddadaan ka xiranto.
Badelkii taas, xildhibaanada waxay isku dayi karaan inay maamulaan jadwalka ayna sharci cusub meel mariyaan, kaas oo dowladda ka hor istaagi karo in UK ay heshiis la’aan baxdo.
Haddii la meel mariyana sharcigaasi dowladda waxaa khasab ku noqonaysa inay Midwoga Yurub ka codsato in loogu daro waqti dhaaraad ah oo ay ku baxdo, inkastoo uu caqabad ku noqon karo go’aanka Boris Johnson ee kala diridda baarlamaanka taas oo horseedi karta inay wayaan waqti ku filan oo ay ajendohooda ku fushadaan.
Waddada 2-aad: Inay xukuumadda ridaan
Xildhibaanada ka soo horjeeda qorshan ayaa waxay haytaan fursad ay codka kasoonida ugu qaadaan dowladda.
Tallaabadaan ayaa waxay xildhibaanada qaadi karaan 4-ta bisha September, maalin uun ka dib marka uu baarlamaanka isku soo laabto.
Hogaamiyaha xisbiga Labour-ka Jeremy Corbyn ayaa sheegay in uu ku baaqi doono in dowladda loo qaado codka kalsooni kala noqoshada xilliga ugu haboon.
Haddii ay bataan xildhibaanada ka soo horjeeda qorshaha dowladda, waxaa bilaabanaya geeddi socodka dowladda meesha looga saarayo.
Muddo 14 maalmood gudohood ayaa ra’isal wasaaraha laga doonayaa inuu cadeeyo in barlamaanka uu qabanayo codka kalsoonida.
Inta lagu guda jiro geeddi socodka, haddii xildhibaano kale ay taageeraan xildhibaanadii hore ra’isal wasaaraha haatan jira ayay u badan tahay inuu sidaa qadka uga baxo.
Haddii muddo 14 maalmood ah dowlad lagu soo dhisi waayo doorasha guud ayaa lagu dhawaaqaya taas oo qaadan karto muddo shan toddobaad ah.
Waxaa kaloo suuro gal ah in arrintaan lala tiigsado sharciga.